कोरोनासँग लड्दै न्यूयोर्क शहर « Nepali Digital Newspaper
१७ चैत्र २०७६, सोमबार १२:२६
विश्वका अधिकांश व्यक्तिका सपनाको शहर हो न्यूयोर्क । न्युयोर्क पुग्ने वा उक्त शहरलाई नजिकबाट हेर्ने सपना धेरै मानिसमा हुन्छ । अमेरिकाको यस शहरको नाम लिँदा पनि गौरवान्वित हुनेको जमात पनि कम छैन । तर विडम्बना ! आज अवस्था त्यस्तो रहेन । कुनै समय यो शहरमा पुगेर पाइला टेक्न तँछाडमछाड गर्नेहरू यतिबेला नाम लिन पनि हिच्किचाउन थालेका भेटिन्छन् । हिन्दी फिल्मको एउटा सम्वाद याद आउँछ– समय समयकी बात है कालियाँ !
सपनाको यो शहर अहिले खतर्नाक महामारीको चपेटाबाट मुक्त हुने छटपटाहटमा छ ।
केरोना भाइरसबाट ४० हजार व्यक्ति न्यूयोर्कमा मात्र कोरोना संक्रमित देखिएका छन् भने यो साता मात्र न्यूयोर्कले ८० जना भन्दा बढी मानिसलाई गुमायो । अब यो सख्या बढेर कति पुग्ने हो– आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्को उल्लेख्य कुरा के हो भने यो शहरमा विश्वका नाम कहलिएका सयभन्दा बढी अर्बपति बस्छन् । यतिबेला यी अर्बपतिहरूको शान, मान र वाहवाही गुमनाम हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
विश्वकै अति नै व्यवस्थित मानिन्छ अमेरिकाको यो शहरलाई । तर, अहिले कोरोनाको डर र त्राहीत्राहीले अब्यवस्थित र भागदौड गर्ने शहरमा गनिन पुगेको छ । अवस्था यस्तो भए तापनि यो सुन्दर शहरमा बस्ने सुन्दर मन भएका मानिसहरूले आँट–साहस र विश्वास भने गुमाएका छैनन् । आफ्नो सरकारले दिएको ढाडस र भरोसालाई शक्तिमा बदल्दै न्यूयोर्कवासीले प्रस्तुत गरेको आत्मबल साँच्चै ‘वाह’ गर्नलायकको छ ।
दिनदिनै सर्वसाधारणहरूको निधन भएकोभयै छ । बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सकहरूको निधनमा पनि यो शहरले रेकर्ड राख्न थालेको छ । यसरी आफ्ना सहकर्मीहरूले आफ्नै आँखा अगाडी देह त्याग गरेको टुलुटुलु हेर्न विवश चिकित्सकहरूले पनि हिम्मत हारेका छैनन् । उनीहरू आफ्नो ज्यानको पनि पर्वाह नगरी मुलुक र मुलुकका नागरिकहरूप्रति दत्तचित्त भएर लागिपरेका छन् । यो मामिलामा न्यूयोर्कका चिकित्सकहरूले सबैबाट ताली पाएका छन् ।
सर्वसाधारणलाई मात्रै होइन, न्यूयोर्कमा कोरोनाले दमकलका कर्मचारीहरूलाई पनि छाडेको छैन । कोरोनाबाट चिकित्सकलगायत दमकलका कर्मचारी र प्रहरीलाई पनि संक्रमित तुल्याएपछि पूरा शहर नै आतंकित हुन पुगेको छ यतिबेला । शहरमा यति धेरै त्रास र आतङ्क छ कि विश्वप्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायरसमेत मसानघाट जस्तो सुनसान छ । सधैं ब्यस्त, मस्त र रमझममा आफ्नो समय अघि बढाइरहेको न्यूयार्क शहरको परिचय उराठ र सन्नाटाको शहर जस्तो बन्न पुगेको छ ।
आफ्नो जन्मस्थल, कर्मस्थलको अवस्था यस्तो दारुण हुँदा पनि न्यूयोर्कवासीको साहसमा कमी नआउनु उदाहरणीय छ । उनिहरूले सरकारलाई दिएको साथ, समर्थन र नागरिकको धैर्यता साँच्चै सलाम गर्नलायकको छ । उनीहरूलाई विश्वास छ कि ईश्वरको घरमा देर छ तर अंधेर छैन । सधै यस्तै अवस्था कहाँ रहला र ? रातपछि बिहान अवश्य हुन्छ भन्ने त उक्ति नै छ । यही आशा, भरोसा र विश्वासमा कोरोनासँग जुध्दै सपनाहरू विश्रृङ्खल हुन नदिन भरमग्दूर प्रयत्न गर्दैछ न्यूयोर्क शहर । आशा छ, यो शहरले कोरोना भाइरसलाई जितेरै छोड्नेछ ।
‘डिसेम्बर फल्स’को यूटुब र अष्ट्रेलिया-अधिकार एजुकेसन एण्ड माइग्रेशन कर्नरले किन्यो
राजन घिमिरे चलचित्र ‘डिसेम्बर फल्स’को यूटुब र अष्ट्रेलिया अधिकार बिक्री भएको छ । यो चलचित्रको यूटुब र अष्ट्रेलिया प्रदर्शनको अधिकार